ukuphrinta Digital ku format esikhulu, esigcwele umbala isithombe Kwanyatheliswa noma nepoligraficheskie izinto, ngokuthi ezinkulu-format zokunyathelisa. Kuyinto uhlobo digital inkjet ukuphrinta, ezingafani kusuka nezinye izinhlobo ukuphrinta evumela ukusetshenziswa kwezinto eziphinde zisebenziseke emashumini budze. Isithombe ngokwaso lisetshenzisiwe printhead, Uyinki amaconsi basakaza on the substrate.
Kuze 70s ekuseni igama elithi "ezinkulu-format ukuphrinta" ngokwalo kwakuhluke kakhulu esamanje, futhi eqala nje ukuyiprinta kusithombe iphepha format esikhulu. A format ophasiswe amayintshi noma ngamasentimitha. Ngokwesibonelo, usayizi ukuphrinta 30 * 40cm. kakade kubhekwe esibanzi. Futhi akukho izimpawu abstract ezifana A1, noma u-R2, akuyona neze lapho.
Isimo sashintsha nge obhekwe ubuchwepheshe bama-computer. Ngenxa computerization jikelele nethuba ukusebenzisa isithombe, hhayi kuphela kwi-medium flat, kodwa futhi-roll. Kuyo yonke le minyaka, lobu buchwepheshe baba eyinkimbinkimbi kakhulu futhi zitholakala kalula, okwaholela yokufunwa wakhe, futhi ezinkulu-format ukunyatheliswa A1 format, isibe omunye ethandwa kakhulu amafomu yayo.
Yokwehlela enkulu yokunyathelisa, njengoba ukukhiqizwa, isetshenziswa kabanzi ngempela. Ngokuvamile, ukuphrinta format ububanzi, isetshenziswa ukukhangisa ongaphandle, ukukhangisa ku ezokuthutha, ngezinye izikhathi ekukhangiseni ezifuywayo, ekuhlobiseni ingaphakathi. Ngosizo ukukhangisa ezinjalo zenziwa amafasitela kanye mbumbulu zezakhiwo, amahholo amakhonsathi, emafasiteleni. Ukusebenzisa ukuphrinta ububanzi-format, ungakha i-billboard ebekwe banoma iyiphi isayizi. Wadala ngosizo lokhu zokunyathelisa - enye yezindlela eziphumelela kakhulu ukudlulisela ukwaziswa kumthengi.
Kubalulekile futhi ukuthi umsebenzi wokunyathelisa ezinjalo singasetshenziswa ezihlukahlukene abezindaba, kungakhathaliseki ifilimu, self-Yesigcilikisha, banner Indwangu, noma iphepha plain kakhulu. Ukwakha isithombe esetshenziswa uyinki kuphela-based, amelana lokushisa ukweqisa, singesabi futhi imvula, noma iqhwa, noma ukushisa. Uyinki kuphela inikeza ikhwalithi yesithombe nokuphila isikhathi eside.
Ukuze wezangaphakathi libhekene ezinkulu-format ukuphrinta, high quality imibala nokugqama kwayo. Abezindaba njenganoma yikuphi - vinyl, indwangu, oracal, iphepha, ucwecwe. upende Modern, ukuvumela laminate isithombe, abazi ukungena impahla kanye zitholakala phezulu. Kungenzeka futhi nge ukuthengiselana okunjalo isithombe ngomumo njengoba sisebenza isendlalelo ingcina futhi obandayo kwamanetha al.
Ukuphrinta ukukhangisa ongaphandle ukuvikelwa eyengeziwe ayidingeki, ngenxa udayi efanayo kuphela. Ngenxa yalokhu, uphawu okunjalo akukhona ezibizayo.